राजनीति Archives - Page 51 of 51 - palpalko palpalko
कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काकाे निधन
नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको निधन भएको छ। भारतको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचारत रहेका नेता खड्काको आज निधन भएको हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गरेर नेता खड्काको निधन भएको
काठमाडाैं, १४ चैत सरकारले विगतदेखि दिँदै आएको सार्वजनिक बिदामा व्यापक कटौती गर्दै छ । २२ दिनको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको हो । अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ
युएस-बंगला विमान दुर्घटना : परिवारले पाउँछन् १० कराेडसम्म बिमा रकम
काठमाडौं ८ चैत यूएस बंगलाको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका तथा घाइतेका परिवारले पाँच लाखदेखि १० लाख अमेरिकी डलर (पाँचदेखि १० करोड रुपैयाँ) सम्म बिमा पाउने देखिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट
कांग्रेस उपसभापतिमा गच्छदार !
काठमाडाैं, ७ चैत नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले आफूलाई पार्टी उपसभापतिको जिम्मेवारी दिइए पार्टीलाई थप बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने बताएका छन् । स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आठौँ स्मृति दिवसका
५ चैत । काठमाडौं साढे दुई वर्षअगाडिको ‘टीकापुर घटना’ का मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई ‘जेलभित्रै’ प्रतिनिधिसभा सांसदको शपथ गराउने तयारी भएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ सरकारले त्यसको
तरुण दलले सात प्रदेशका यी ठाउँमा किन चलाउँदैछ प्रशिक्षण ?
४ चैत । काठमाडौं नेपाली कांग्रेसको युवा दस्ता नेपाल तरुण दलले सातवटै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने भएको छ । फागुन २२, २३ र २४ गते नगरकोटमा जिल्ला अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेला
काठमाडौँ, ३ चैत । जनताको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा पाँच स्थानमा सञ्चालित ‘हेलो सरकार सेवा’ बन्द भएको छ । पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्थापना गरिएको हेलो सरकार
३ चैत । काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संचार राज्यमन्त्रीमा काभ्रेका गोकुल बास्कोटालाई नियुक्त गरेका छन् । काभ्रे २ बाट प्रतिनिधिसभामा अत्याधिक मत ल्याएर बास्कोटा विजयी भएका थिए । काभ्रे एमाले
त्रिभुवन विमानस्थलभित्र नेपाली हवाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हवाई दुर्घटना भएको छ । बंगलादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमनभित्र पर्ने युएस–बंगला एयरलाइन्सको ‘बम्बाडिएर (डिएच८डी)’ जहाज दुर्घटना हुँदा ४९ जनाको निधन भएको छ । चालक